Iincwadi ezikhuthazwayo ezivela kwinkitha yababhali
Ezona ncwadi zibalaseleyo zababhali abaninzi.
Iincwadi ezi-3 eziphezulu zikaDeborah Levy
Kutshanje, uDeborah Levy uhamba phakathi kwebali kunye nebhayografi. Umthambo woncwadi njenge-placebo yamanxeba exesha, ubukrwada bobomi kunye nokurhoxa ngokwendalo ngenkani. Kodwa yile nto imangalisayo kweso sigaba sobuntu obudala apho iqala ukubala ...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zikaJuan Francisco Ferrándiz
Ndibandakanya uJuan Francisco Ferrándiz kuninzi lwababalisi abakhulu bangoku benoveli yembali eyenziwe eSpain. Ndibhekisa kubabhali bezizukulwana ezininzi ezifana noChufo LLorens, uLuis Zueco okanye uJosé Luis Corral. Ngenxa yokuba zonke zihamba ngendlela yazo, zinenxalenye engaphezulu okanye encinci yembali okanye intsomi, thina ...
Iincwadi ezi-3 eziphambili zika-Antonio Escohotado
Ukuba kwakunokuthiwa kusekho iintanda-bulumko ngenkulungwane yama-XNUMX, kwaba ngumbulelo ku-Antonio Escohotado ozimiseleyo ukuba enze ithiyori kwaye atsale i-empiricism ye-metaphysical ngokuzihlola ezinzulwini. Ewe, kwakhona iziyobisi ngokusebenzisa. Yonke into yokufezekisa loo nto i-kaleidoscopic lucidity ifana ne-psychedelics ...
Ezona ncwadi zi-3 zigqwesileyo nguTamara Tenenbaum
Xa umntu efumanisa ababhali abafana noSchweblin okanye iTenenbaum, kubonakala ngathi uye wasondela kwibali lesiJamani. Kodwa bobabini ooSamanta kunye noTamara, amagama andulela ezo fani, bangababhali baseArgentina abasisondeza kumabali abo kunye neBuenos Aires vitola, ukuze bazuze kuncwadi lwaseArgentina ...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo nguJonathan Franzen
Ngamanye amaxesha kuyothusa ukujonga kwindawo engenakoyiswa yenoveli yangoku. Ngaphantsi kwesambrela sexesha langoku, zonke iintlobo zemixholo zinokukhuselwa mhlawumbi ekuhambeni kwexesha ziya kulungelelaniswa zibe ziindidi zazo ezifanelekileyo. Kungenxa yokuba ukwenza indalo esemthethweni kunye ne-avant-garde ibalasele ngendlela engeyiyo ...
Iincwadi ezi-5 ezigqwesileyo zeentsomi zamaNorse
Kule ntsomi yaseScandinavia uninzi lwenu oludlula apha luya kuphakamisa izandla ukuba usondela kuye enkosi kuThor kunye nomntakwabo wenze intshaba, uLoki. Kwaye imbalwa imifanekiso enamandla kakhulu ye "Olympus" ye-peninsula yaseYurophu esemantla njengaloo Thixo ...
Ezona ncwadi zi-3 zigqwesileyo nguCristina Peri Rossi
Ukubhala yinto yesiqalekiso evela koothixo. Ababhali abagwetyelwe ukubalisa njengoCassandra, betyhila into ekungekho mntu ufuna ukuyiva, okanye uDante ebandezeleka ngakumbi kuno-Ulysses wakhe ocatshulweyo enzonzobileni yesihogo. Isiqalo esibuhlungu sokujongana nomsebenzi kaCristina ...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zikaWilbur Smith
Inoveli yembali inezithintelo ezisengqiqweni zokuphuhlisa iyelenqe. Akufanele kube lula ukuqala ukubhala iinoveli zalolu hlobo phantsi kwendlela yababhali abaninzi abanjengoStephen King, ababhengeze njengabakhuseli benkululeko ethile yabalinganiswa. Kucacile ukuba uvumela umlinganiswa acinge, enze, ...
Iphepha1 Iphepha2 ... Iphepha159 Elandelayo →